ဈေးရောင်းနေတာ သနားတယ်လို့ လာပြောတဲ့သူငယ်ချင်းကို ပိုသနားမိတယ်ဆိုတဲ့ မိုင်းမိုင်ဆိုင်း – အနုပညာရပ်ဝန်း
ဈေးရောင်းနေတာ သနားတယ်လို့ လာပြောတဲ့သူငယ်ချင်းကို ပိုသနားမိတယ်ဆိုတဲ့ မိုင်းမိုင်ဆိုင်း
မြန်မာအိုင်ဒေါသီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲကနေတဆင့် ပရိသတ်အားပေးတဲ့ အဆိုတော်တစ်ယောက်အဖြစ် ရပ်တည်လာနိုင်ခဲ့တဲ့ ကချင်တိုင်းရင်းသူလေးမိုင်းမိုင်ဆိုင်းကတော့ အသံပါဝါအားကောင်းကောင်းနဲ့ သီချင်းတွေကို သီဆိုနိုင်သူတစ်ယောက်ပါ။ ဖျော်ဖြေပွဲတွေ တောက်လျှောက်သွားနေရပေမယ့် အခုလို ကိုဗစ်ကာလအလုပ်တွေရပ်နားထားချိန်မှာတော့ အပိုဝင်ငွေရအောင် ကြက်ကင်နဲ့အခြားအကင်များကို ကိုယ်တိုင်လုပ်ကာ တစ်ဖက်တစ်လမ်းက ဝင်ငွေရှာနေသူပါ။
အရသာကောင်းကောင်းနဲ့ သူများနဲ့မတူအောင် စေတနာထားရောင်းချပေးနေတဲ့ မိုင်းမိုင်ဆိုင်းရဲ့ အစားအသောက်တွေကိုတော့ မှာယူအားပေးသူတွေများစွာရှိနေပြီး တစ်ရက်မှ မနားရအောင် အောင်မြင်နေတာပါ။ ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကတော့ မိုင်းမိုင်ဆိုင်းကို အခုမှ လူမှန်နေရာမှန် ရောက်တော့တယ်လို့ ပြောခဲ့တာကြောင့် မိုင်းမိုင်ဆိုင်းကတော့ သူ့ရဲ့အတွေးအခေါ်တချို့ကို မျှဝေခဲ့ပါတယ်။ ” သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ကျနော်ကြက်ကင်ရောင်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး လှောင်သလို ပြောင်သလိုနဲ့ အသားသည်လေးခုမှ လူမှန် နေရာမှန်ဆိုပြီး သနားသလို လှောင်တယ်။စိတ်တော့ တစ်ချက်ခုသွားတယ်။။သူကစတာလို့ပြောပေမယ့် ကျနော်ကတော့ဒီနောက်ပိုင်း စိတ်လည်းမဆိုးချင်တော့သလို ရန်လည်းမတွေ့တော့ပါဘူး…. တကယ်တော့ ဒီကာလမှာ အလုပ်မရှိအကိုင်မရှိ သုံးဖြုန်းစားသောက် ပျော်ပါးနေတဲ့သူကမှ တကယ်သနားစရာကောင်းတာသူမသိရှာဘူး။။
ပိုက်ဆံဘယ်လောက်ရှိရှိအလုပ်မရှိအကိုင်မရှိ ပျော်ပါးနေရင် ဘယ်လောက်တောင့်ခံနိုင်မှာမို့လို့လဲ။။ တကယ်တော့ ကျနော်ကမှ သူ့ကိုသနားနေတာ သူမသိရှာဘူး။။ ကျမကတော့ ကျမကိုယ်ကျမဂုဏ်ယူတယ် ။အခက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါ တိတ်တဆိတ်ကြိတ်ငိုလိုက်တာကလွဲလို့ ကျမကရောင့်ရဲတတ်ပါတယ်လေ” ဆိုပြီး ရေးသားခဲ့ပါတယ်…. အခုလို တစ်ကမ္ဘာလုံးခက်ခဲနေချိန်မှာ ကြိုးစားစီးပွားမရှာဘဲ သုံးဖြုန်းနေသူကမှ တကယ်သနားဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ မိုင်းမိုင်ဆိုင်းရဲ့စကားကို ထောက်ခံတယ်မလား ပရိသတ်ကြီးရေ…
Source – Mai Mai Seng
#credit original poster
ရှမ်းပြည်တစ်ဝိုက်မှာ ဘုရားဖူးထွက်နေတဲ့အကြောင်းကို ပရိသတ်တွေကိုမျှဝေလာတဲ့ ဟန်တီ
ရဲဘော်လေးတွေကို ပြန်ရောက်တာကြိုမပြောဘဲ Surprise လုပ်လိုက်တဲ့ နိုင်နိုင်း
တစ္ခ်ိန္က ဟန္ဇာမိုးဝင္းေျပာခဲ့ဖူးတဲ့ စကားတစ္ခြန္းက...